Dad ka careysan tallaabo ay qaaday Dowladda oo banaanbax ka dhigay Muqdisho - Awdinle Online
Dad ka careysan tallaabo ay qaaday Dowladda oo banaanbax ka dhigay Muqdisho
Banaanbaxaan ayaa waxaa dad careysan Maanta oo khamiis ah ka dhigeen Xaafado ku hareereysan Wadada Warshadaha ee degmooyinka Hurwaa & Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho
Banaanbaxa ayaa waxaa dhigay dad u badan Gaadiidleey, waxaana ay ka cabanayaan dhagxaanta lagu jaray wadada warshadaha, iyaga oo dalbanaya in laga qaado.
Mid kamid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu sheegay in ka sokow dhagxaanta wadooyinka qaar lagu jaray ay ka cabanayaan in Ciidamada dowladda ay Gaadiidleyda ku amrayaan inay bixiyaan lacag si ay wadada ku maraan.
Waxaa uu sheegay in Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay koontorool Cuusb soo dhigteen Isgyska Ex-koontorool Afgooye, isla markaana Gaadiidleyda ay ka doonayaan lacag dhan $2 Dollar gaarigii aan bixina uusan u soo gudbeynin dhinaca kale ee degmooyinka gobolka Banaadir.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Maalin ka hor munaasaad loogu magac daray furista Wadooyinka ka sheegay in wadooyinka dhagxaanta ku xirnaa ay fureen, hayeeshee ay soo baxeyso cabasho ku aadan in wadooyinkii la furay Gaadiidleyda laga weeydiinayo inay lacag ku maraan.
Previous articleCiidamo ka tirsan Galmudug oo gadooday, kadib khilaaf Cusub oo soo baxay
Next articleShacab ku dhintay qarax ka dhacay Shabeellaha Dhexe